Premier League Hall Of Fame တှငျ ပေါလျစခိုးထကျ စောပွီး ဂရြတျကို ထညျ့သှငျးတာ မှနျသလား? – Play Maker Sports Journal
ယနမှေ့ာလီဗာပူးဂန်ထဝငျကှငျးလယျကစားသမားစတီဗငျဂရြတျဟာ Premier League Hall Of Fame တှငျထညျ့သှငျးခွငျးခံရပါတယျ။စတီဗငျဂရြတျဟာအလနျရှီးယား၊သီယာရီဟငျနရီ၊ရှိုငျကိနျး၊အဲရဈကနျတိုနာ၊ဖရနျ့လမျးပတျ၊ဒငျးနဈဘားကမျ့တို့ပွီးနောကျ Premier League Hall Of Fame တှငျထညျ့သှငျးခွငျးခံရတာလညျးဖွဈပါတယျ။
ယငျးသို့စတီဗငျဂရြတျကို Premier League Hall Of Fame လိုကျမှုနဲ့အတူပရိသတျမြားအကွားတှငျအငွငျးပှားစရာမြားဖွဈနပေါတယျ။
အင်ျဂလနျလကျရှေးစငျကစားသမားဟောငျးဟာပရီးမီးယားလိဂျပှဲ၅၀၄ပှဲကစားကာဂိုး၁၂၀သှငျးယူခဲ့ပါတယျ။သူဟာPremier League Hall Of Fame တှငျထညျ့သှငျးခွငျးခံရတဲ့ပထမဆုံးလီဗာပူးကစားသမားလညျးဖွဈပါတယျ။
ဒါပမေယျ့အခွားတဈဖကျမှာပရီးမီးယားလိဂျဖလားကိုတဈကွိမျမြှမရဖူးတဲ့စတီဗငျဂရြတျကိုမနျယူနှငျ့အတူပရီးမီးယားလိဂျဖလား၁၁ကွိမျအထိဆှတျခူးခဲ့တဲ့ပေါလျစခိုးထကျစောပွီးPremier League Hall Of Fame တှငျထညျ့သှငျးလိုကျမှုကပရိသတျမြားအကွားမှာအငွငျးပှားစရာဖွဈနပေါတယျ။
ပရိသတျတဈဦးက “ဂရြတျကထိပျတနျးကစားသမားတဈဦးပါ။ဒါပမေယျ့သူကပရီးမီးယားလိဂျတဈခါမှမရဖူးသေးတဲ့သူပါ။သူ့ကို HOF မှာဂြှနျတယျရီ၊ဂဈ၊ပေါလျစခိုး၊ရီယိုဖာဒီနနျ၊ဝိနျးရှနျးနီတို့ထကျစောပွီးထညျ့သှငျးလိုကျတာရယျစရာတော့အကောငျးသား”လို့ဆိုသှားပါတယျ။
ဒါ့အပွငျအခွားပရိသတျတဈဦးကလညျး “လမျးပတျနဲ့ဂရြတျကိုပေါလျစခိုးထကျစောပွီး Premier League Hall Of Fame မှာထညျ့သှငျးလိုကျတယျဟုတျလား။နှဈဦးလုံးကကွီးကယျြတဲ့ကစားသမားတှပေါ။ဒါပမေယျ့ပေါလျစခိုးကိုမမီပါဘူး။သူကမှတကယျ့ဂန်ထဝငျအစဈအမှနျပါ”လို့ဆိုသှားပါတယျ။
ပရိသတျတဈဦးကလညျး “ပေါလျစခိုးကပရီးမီးယားလိဂျဖလား၁၁ကွိမျရခဲ့တယျ။းဂရြတျက၁လုံးတောငျမရခဲ့ဘူး၊PLHOF မှာထညျ့သှငျးတဲ့အခါဆုဖလားအပွငျအခွားအရာတှကေိုလညျးထညျ့သှငျးစဉျးစားတာသိပါတယျ။ဒါပမေယျ့အခုဖွဈနတောကရယျစရာကွီးဖွဈနပေါပွီ”လို့ဆိုသှားပါတယျ။
Premier League Hall Of Fame တွင် ပေါလ်စခိုးထက် စောပြီး ဂျရတ်ကို ထည့်သွင်းတာ မှန်သလား?
ယနေ့မှာလီဗာပူးဂန္ထဝင်ကွင်းလယ်ကစားသမားစတီဗင်ဂျရတ်ဟာ Premier League Hall Of Fame တွင်ထည့်သွင်းခြင်းခံရပါတယ်။စတီဗင်ဂျရတ်ဟာအလန်ရှီးယား၊သီယာရီဟင်နရီ၊ရွိုင်ကိန်း၊အဲရစ်ကန်တိုနာ၊ဖရန့်လမ်းပတ်၊ဒင်းနစ်ဘားကမ့်တို့ပြီးနောက် Premier League Hall Of Fame တွင်ထည့်သွင်းခြင်းခံရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။
ယင်းသို့စတီဗင်ဂျရတ်ကို Premier League Hall Of Fame လိုက်မှုနဲ့အတူပရိသတ်များအကြားတွင်အငြင်းပွားစရာများဖြစ်နေပါတယ်။
အင်္ဂလန်လက်ရွေးစင်ကစားသမားဟောင်းဟာပရီးမီးယားလိဂ်ပွဲ၅၀၄ပွဲကစားကာဂိုး၁၂၀သွင်းယူခဲ့ပါတယ်။သူဟာPremier League Hall Of Fame တွင်ထည့်သွင်းခြင်းခံရတဲ့ပထမဆုံးလီဗာပူးကစားသမားလည်းဖြစ်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့်အခြားတစ်ဖက်မှာပရီးမီးယားလိဂ်ဖလားကိုတစ်ကြိမ်မျှမရဖူးတဲ့စတီဗင်ဂျရတ်ကိုမန်ယူနှင့်အတူပရီးမီးယားလိဂ်ဖလား၁၁ကြိမ်အထိဆွတ်ခူးခဲ့တဲ့ပေါလ်စခိုးထက်စောပြီးPremier League Hall Of Fame တွင်ထည့်သွင်းလိုက်မှုကပရိသတ်များအကြားမှာအငြင်းပွားစရာဖြစ်နေပါတယ်။
ပရိသတ်တစ်ဦးက “ဂျရတ်ကထိပ်တန်းကစားသမားတစ်ဦးပါ။ဒါပေမယ့်သူကပရီးမီးယားလိဂ်တစ်ခါမှမရဖူးသေးတဲ့သူပါ။သူ့ကို HOF မှာဂျွန်တယ်ရီ၊ဂစ်၊ပေါလ်စခိုး၊ရီယိုဖာဒီနန်၊ဝိန်းရွန်းနီတို့ထက်စောပြီးထည့်သွင်းလိုက်တာရယ်စရာတော့အကောင်းသား”လို့ဆိုသွားပါတယ်။
ဒါ့အပြင်အခြားပရိသတ်တစ်ဦးကလည်း “လမ်းပတ်နဲ့ဂျရတ်ကိုပေါလ်စခိုးထက်စောပြီး Premier League Hall Of Fame မှာထည့်သွင်းလိုက်တယ်ဟုတ်လား။နှစ်ဦးလုံးကကြီးကျယ်တဲ့ကစားသမားတွေပါ။ဒါပေမယ့်ပေါလ်စခိုးကိုမမီပါဘူး။သူကမှတကယ့်ဂန္ထဝင်အစစ်အမှန်ပါ”လို့ဆိုသွားပါတယ်။
ပရိသတ်တစ်ဦးကလည်း “ပေါလ်စခိုးကပရီးမီးယားလိဂ်ဖလား၁၁ကြိမ်ရခဲ့တယ်။းဂျရတ်က၁လုံးတောင်မရခဲ့ဘူး၊PLHOF မှာထည့်သွင်းတဲ့အခါဆုဖလားအပြင်အခြားအရာတွေကိုလည်းထည့်သွင်းစဉ်းစားတာသိပါတယ်။ဒါပေမယ့်အခုဖြစ်နေတာကရယ်စရာကြီးဖြစ်နေပါပြီ”လို့ဆိုသွားပါတယ်။